Banyere amụma nzuzo nke Urdolls
Ndị ọrụ kwesịrị ịghọta ma rube isi na iwu ndị a
Anyị na-asọpụrụ nzuzo gị, iwu a ga-ewepu nkọwa niile gbasara ihe kpatara anyị ji anakọta ozi nkeonwe gị na otu esi eji ya na ịzụ ahịa, ka ị na-abanye na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ zụta, Ọ bụrụ na ị kwenyeghị, ị gaghị edebanye aha, nweta ma jiri weebụsaịtị anyị.
Na-anakọta ozi nkeonwe gị
Mgbe ị debanyere aha ịbụ onye ọrụ ma ọ bụ zụta ihe ndị ahụ na weebụsaịtị anyị, anyị ga-anakọta ozi niile ị na-enye nke ọma, dị ka aha gị, adreesị gị, akwụkwọ ozi gị, akara ekwentị gị na ihe ndị ọzọ. Na mgbakwunye, anyị ga-enweta adreesị Internet Protocol kọmputa gị (IP) na kọmputa gị, sava ngalaba, ihe nchọgharị weebụ, iji nweta ngwaọrụ site na weebụsaịtị.
Ihe mere ị ga-eji jiri ozi nkeonwe gị
A ga-eji ozi ahụ maka ọkwa nke ọrụ ndị ahịa na-emeziwanye, na-akwalite ahụmịhe ịzụrụ gị, yabụ, ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị ga-akpọtụrụ gị maka ozi nke gị na ihe ịzụrụ na weebụsaịtị, nke ga - enyere anyị aka ịkọwapụta ihe egwu na aghụghọ nye iwu, ma mee ka anyị bulie weebụsaịtị anyị .Ọ ga-ejikwa usoro gị nke ọma.Pls mee ka obi sie anyị ike, anyị agaghị ere ma kesaa ozi nkeonwe gị.
Dabere na ozi ị nyere anyị, anyị ga-agbanye ụfọdụ mgbasa ozi ị nwere mmasị na ya, maka ebumnuche nke imeziwanye ọrụ ka mma.
Kuki bụ obere faịlụ data maka data cellection technolgy, ga-eji ya na bros gị, mgbe ị nweta weebụsaịtị, ọ ga-agbaso njirimara NJ onye ọrụ ị nyere, anyị ga-eji teknụzụ a iji melite arụmọrụ ahụ ma bulie ahụmịhe nke buyingzụta, na-enye gị afọ ojuju iji gboo mkpa gị na atụmanya gị .Cookie ga - akwụsị ma ọ bụrụ na i mechie broshọ ahụ.
Weebụsaịtị anyị bụ maka ndị okenye naanị, ị ga-eru afọ steeti gị na-akọwapụta mgbe i jiri ya, ọ bụrụ na ọ bụghị, biko abanyela ma jiri ọrụ niile ahụ.
Iji kpuchido ozi nkeonwe gị, ejirila sava nzuzo na ụlọ ọrụ ọkọlọtọ SSL zoro ezo teknụzụ, na-eme ka ozi nkeonwe gị ka ọ ghara ịla n'iyi, jiri, nweta, kpughere, gbanwee ma gbanwee site na ndudue.
Anyị ga-emelite iwu nzuzo na-ezighi ezi, na-egosipụta mgbanwe arụmọrụ, oge ụfọdụ maka iwu site na iwu ma ọ bụ nlekọta .Mgbe ị ga-abanye weebụsaịtị ọzọ, ọ pụtara na ị kwenyere ịnabata nyocha niile.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara iwu nzuzo, biko kpọtụrụ anyị site na email.